တရုတ် Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD, Chrysler က Android ကား DVD, Touch ကို Screen ကို Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD,Chrysler က Android ကား DVD,Screen ကို Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD ကိုထိပါ,Chrysler က Android 4.4 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Chrysler / Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD
Chrysler / Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD, Chrysler က Android ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Screen ကို Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD ကိုထိပါ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Liberty android touch screen ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CRYSLER 300C 2004 အတွက်စတိုင်အသစ် Android စတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၁၉၉၉-၂၀၀၄ တွင် Jeep အတွက် Android 10.0 car dvd player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7 '' Jeep Chrysler အတွက် Universal Android Car radio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Compass ကားစတီရီယို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Renegade 2016 အတွက် Klyde dsp android head unit  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Renegade 2016 အတွက်2din ရေဒီယို android  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခြာရိုကီ 2017 အတွက်နှစ်ဆ din GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံလိုက်အိမ်မြှောင် 2014-2015 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wrangler ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခြာရိုကီ 2016-2017 လူပျို din ကားတစ်စီးအသံဖိုင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wrangler 2010 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2019 ပူဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံလိုက်အိမ်မြှောင်များအတွက် 2019 ခုနှစ်နယူး octa-core ကားတစ်စီး GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Jeep အဘို့ကားကိုအသံနဲ့ DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Autoradio ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016-2017 များအတွက်နှစ်ဆ din GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2015 octa Core 4GB RAM ကို Navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
octa Core 32G ရေဒီယို GPS စနစ်ခြာ 2017  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2016 Wrangler များအတွက် High Quality ကားမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံလိုက်အိမ်မြှောင် 2014 High Quality ကားမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Liberty android touch screen ကားရေဒီယို
Jeep Grand Cherokee အတွက် Android9PX5 octa core head ဖြစ်သည် ဤ 7inch PX5 octa core 4G RAM, 32G နှင့် 64G ROM ကားသစ်သည်ဥရောပတွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီး Jeep အမျိုးအစားများစွာတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဒီမော်ဒယ် fit နှင့်ကိုက်ညီ Grand Cherokee 1999-2004 /...
CRYSLER 300C 2004 အတွက်စတိုင်အသစ် Android စတီရီယို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 293 / Piece/Pieces
Crysler 300C 2004-2008 အတွက် Android9PX5 octa core head ဖြစ်သည် Crysler 300C 2004 ထောက်ခံမှုဘလူးတုသ်ခေါ်ဆိုခ / အသံပြဇာတ်, Sync ကိုဖုန်းစာအုပ်, အမြန်ရှာဖွေရေးအဆက်အသွယ်များ, ပြင်ပ microph တဦးတည်းမှုအတွက်...
၁၉၉၉-၂၀၀၄ တွင် Jeep အတွက် Android 10.0 car dvd player
၁၉၉၉-၂၀၀၄ တွင် Jeep အတွက် Android 10.0 car dvd player Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM -...
7 '' Jeep Chrysler အတွက် Universal Android Car radio
Supply နိုင်ခြင်း: 35000pcs/month
Chrysler JEEP အတွက် ၇ လက်မအရွယ် Android Car Radio Klyde အင်္ဂါရပ်များ မျက်နှာပြင် Pixel: 1024 * 600 OS: Android9စနစ် CPU: ROCKCHIP PX6 (၃၃၉၉)၊ Cotex A72 + A53,6 Core / Rockchip PX5 Cortex A53, ၈ Core အဓိကကြိမ်နှုန်း: Cotex A72 (1.8Ghz) + A53...
Compass ကားစတီရီယို DVD player
ထုပ်ပိုး: 3.6KGS / Set 470 * 280 * 330MM / လက်ဆောင်သေတ္တာ
Compass ကားစတီရီယို DVD player android နှင့် Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car stereo DVD player သည်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတို့တွင် DVD အတွေ့အကြုံ ၇ နှစ်ရှိပြီးဂျပန်၊ ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊ တူရကီ၊ စပိန်၊...
Renegade 2016 အတွက် Klyde dsp android head unit
Renegade 2016 အတွက် Klyde dsp android head unit Renegade bulit-in WIFI ၏ဟော့စပေါ့များကိုမျှဝေရန် dash multimedia system တွင် - အင်တာနက်ကြည့်ရှုရန်၊ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်၊ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ရန်၊ သင်၏မေးလ်ကိုစစ်ဆေးရန်၊ ကစားရန်ကစားရန်၊...
Renegade 2016 အတွက်2din ရေဒီယို android
Renegade 2016 အတွက်2din ရေဒီယို android Renegade 2016 အတွက်2din radio android သည် GPS navigation & online / offline maps အမျိုးမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့သည်။ အင်တာနက်အတွက် WiFi နှင့်ဟော့စပေါ့ကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။...
ခြာရိုကီ 2017 အတွက်နှစ်ဆ din GPS
ခြာရိုကီ 2017 အတွက်နှစ်ဆ din GPS Built-in ပါ ၀ င်သည့် WiFi module၊ ဝဘ်ရှာဖွေရန်အတွက် WiFi / hotspot ကိုအလွယ်တကူချိတ်ဆက်ရန်၊ ရေဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထောက်ပံ့သည် - ဘူတာ ၃၀ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။ ရေဒီယိုတုံ့ပြန်မှု bandwidth: AM; 522KHZ-1620KHZ; FMD 87.5...
သံလိုက်အိမ်မြှောင် 2014-2015 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယို
သံလိုက်အိမ်မြှောင် 2014-2015 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း 1) Compass 2014-2015 ဘို့ကားတစ်စီးစတီရီယိုအော့ဖ်လိုင်းမြေပုံဒေတာခြင်းမရှိဘဲ Pre-install Google ကမြေပုံ () ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း, ထောက်ပံ့ပင်ကကို USB / SD ကဒ်, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း...
Wrangler များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း 1) Built-in TDA7851 အသံချဲ့စက် IC Wrangler ဘို့ကားတစ်စီးစတီရီယို, subwoofer အသံ output ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့်သီးခြားစီကထိန်းချုပ်ထားသည်။ screen resolution: * 600 1024, ပံ့ပိုးမှု 4K (3840 × 2160...
ခြာရိုကီ 2016-2017 လူပျို din ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
ခြာရိုကီ 2016-2017 လူပျို din ကားတစ်စီးအသံဖိုင် android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် 1.Cherokee 2016-2017 လူပျို din ကားတစ်စီးအသံ, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့,...
Wrangler 2010 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player
Wrangler 2010 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 1. ဒီ Wrangler 2010 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player ၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: မျက်နှာပြင် Pixel: * 600 1024 OS ကို: အန်းဒရွိုက် 9.0 စနစ်က CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53,...
2019 ပူဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016
2019 ပူဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016 1. နောက်ဆုံးရကို Android 9.0 operating system ကို,4+ 32G မှတ်ဉာဏ်, Octa-Core CPU, Android ဖုန်းများအတွက်အသိဉာဏ်စကားသံကိုလက်ထောက် (ဂူးဂဲလ်လက်ထောက်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်) .high...
သံလိုက်အိမ်မြှောင်များအတွက် 2019 ခုနှစ်နယူး octa-core ကားတစ်စီး GPS
သံလိုက်အိမ်မြှောင်များအတွက် 2019 ခုနှစ်နယူး octa-core ကားတစ်စီး GPS Maps ကို: အောက်ပါဧရိယာနှင့်တိုင်းပြည်အပါအဝင် 1.The အသစ်လွင်ဆုံးအခမဲ့မြေပုံ: အာရှ: ဟောင်ကောင်, အင်ဒိုနီးရှား, India.Macao, မလေးရှား, ဖိလစ်ပိုင်, စင်္ကာပူ, ထိုင်း, ဗီယက်နမ်,...
Jeep အဘို့ကားကိုအသံနဲ့ DVD player
Jeep အဘို့ကို Android 9.0 ကားတစ်စီးအသံနှင့် DVD player ကျွန်တော် Jeep ဘို့ငါတို့ကားတစ်စီး DVD player တှငျအဘယျရှိသနည်း Jeep အဘို့ဤယူနစ်ကားတစ်စီး DVD player နဲ့အတူ 1. ကိုသင် BT တို့ကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျချေါသောအခါပထမတော့ Jeep...
Autoradio ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016-2017 များအတွက်နှစ်ဆ din GPS တရုတ်အတွက်ဦးဆောင်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအဖြစ်, Klyde ထိုကဲ့သို့သောရုရှား, တူရကီ, GCC နိုင်ငံများအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြား,...
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ
JEEP ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016 ဘို့ကို Android 8.1 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ 1) 64GB အထိကို USB Port ကို / Micro SD ပေါက် () ထဲမှာ Built Jeep ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2016 ပံ့ပိုးမှု GPS စနစ် Navigation (မြေပုံဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ် app ကိုထည့်သွင်းမ) အတွက် Android...
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2015 octa Core 4GB RAM ကို Navigation
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2015 octa Core 4GB RAM ကို Navigation 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး, မြေမှတ်တိုင်အဆောက်အဦး...
octa Core 32G ရေဒီယို GPS စနစ်ခြာ 2017
octa Core 32G ရေဒီယို GPS စနစ်ခြာ 2017 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး, မြေမှတ်တိုင်အဆောက်အဦး Display, 3D Street...
2016 Wrangler များအတွက် High Quality ကားမာလ်တီမီဒီယာ
2016 Wrangler များအတွက် High Quality ကားမာလ်တီမီဒီယာ 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး, မြေမှတ်တိုင်အဆောက်အဦး...
သံလိုက်အိမ်မြှောင် 2014 High Quality ကားမာလ်တီမီဒီယာ
သံလိုက်အိမ်မြှောင် 2014 High Quality ကားမာလ်တီမီဒီယာ 1, 3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး, မြေမှတ်တိုင်အဆောက်အဦး...
တရုတ်နိုင်ငံ Chrysler / Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD ပေးသွင်း
ဘလူးတုသ်အတူ Chrysler / Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD:
Chrysler / Jeep အဘို့ကားကို mp4, ကစားသမားသည်ယခုအခါဟာ android 6.0 နှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ် function ကိုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လူတွေလည်း 4G နှင့်အတူများစွာသောအမှုအရာလုပျနိုငျ, စမတ်နှင့် 3G ထို့နောက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။
Chrysler / Jeep အဘို့ကင်မရာရာထူးအမည်ကားကိုဗီဒီယိုကနောက်ပြန်ဆုတ်ယာဉ်မောင်းများအတွက်အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်, ဒါသူတို့မျက်စိအားဖြင့် watcing မနိုင်ရာ, ကလူတွေပိုပြီး safty လုပ်ဖြစ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ဖို့သူတို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Chrysler / Jeep အဘို့ကို USB-enabled ရာထူးအမည်ကားတစ်စီးစတီရီယိုကစားသမားတပ်ဆင်ထားပါကလူတွေလွှဲပြောင်းရန်ကို USB ကိုသုံးနိုင်သည်နှင့်လည်းယူနစ်ဒါပေါ်မှ file ကိုပုံစံအသုံးပြုမှုကိုဖတ်ပါ, ဂီတကိုဖတ်ရှု, ဗီဒီယိုနှင့်နိုငျသညျ, optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်: Chrysler / Jeep Sebring2006 300C 2005-2007 / ဂရန်းခြာ 2010 / သံလိုက်အိမ်မြှောင် 2010 / Wrangler 2010 / ခရီး 2010 ကားတစ်စီး mp4, ကစားသမား
Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD Chrysler က Android ကား DVD Screen ကို Jeep ကို Android မော်တော်ကား DVD ကိုထိပါ Chrysler က Android 4.4 ကား DVD Mazda2ကို Android မော်တော်ကား DVD